Kudutshulwe amalunga omndeni amahlanu | News24
Kudutshulwe amalunga omndeni amahlanu
USAHLALELE ovalweni umndeni waKwaMaphumulo endaweni yaseMaqongqo kulandela isigameko sokudutshulwa kwamalunga omndeni wawo amahlanu ngeSonto ebusuku mhla zingama-26 kuNhalaba (May).
Kulamalunga omndeni adutshuliwe kushone amabili kanti amathathu wona asesibhedlela.
Abashonile uNks Kwenzi Maphumulo (33) kanye nengane yakhe ebineminyaka emibili uMelokuhle Maphumulo. Ubaba wakhe (83), unkosikazi wakhe nodadewabo omdala bona balimalile baphuthunyiswa esibhedlela.
Ngokuthola kwe-Echo ngelinye ilunga lomndeni uMnu Thembinkosi Maphumulo uthe yena wayengekho ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko wayehambise omunye umakhelwane esibhedlela ngemuva kokushaywa kanzima. Uthe ngesikhathi esesibhedlela uthole ucingo obeluphuma kudadewabo uVelile emtshela ukuthi kunabantu abazungeze umuzi abashaya amakhwela engathi bazohlasela.
“Ngaleso sikhathi kwakuyoshaya ihora lesishiyagalolunye ebusuku ngisanda kufika nami esibhedlela. Ngatshela udadewethu ukuba abavale iminyango bakhiye balale phansi. Akuphelanga ngisho imizuzu emihlanu udadewethu waphinde wangifonela wangitshela ukuthi sebedutshuliwe bonke angiphuthume ekhaya. Ngathi uma ngibuza ukuthi ukuphi uKwenzi wathi angize ekhaya ngokushesha naye esekhuluma engathi uyanqamuka,” kuchaza yena.
Uthe wafonela amanye amalunga omndeni angahlali endaweni ukuba akaphuthume ekhaya kodwa uyena owafika kuqala.
“Ngafica uKwenzi elele kusofa egexile ebelethe ingane yakhe emhlane uMelo nayo isiphuma igazi ngomlomo sebeshonile. Ingane yayinamanxeba okudutshulwa ekhanda. Abanye abalimele ngacela usizo komakhelwane kanye namanye amalunga omndeni ayesefikile ukuba sibaphuthumise esibhedlela. Kulaba abalimele kukhona nowesifazane okhulelwe ebekumele abelethe kuyona lenyanga naye udubulekile enyongeni.”Uthe ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko kwakukhona amalunga omndeni ayisishiyagalombili. Uthe izingane ezintathu zona zisindiswe ukuthi bezingekho endlini kalawondi kodwa bezikwenye indlu zibukele umabonakude.
UMnu Maphumulo uthe loku kuhlaselwa usola ukuthi kuhlangene nesigameko esenzeka ngezikhathi zehora lesikhombisa ntambama ngalo isonto nalapho ayezama khona ukulamulela omunye umfana wasendaweni owayeshaywa. “Inkinga yaqala ngokuthi ngibe nenkinga yephampu yamanzi ekhaya ngabe sengicela umfana wakamakhelwane ukuba angisize ukuzolilungisa kodwa wangitshela ukuthi ngeke akwazi ukuza kumele ngizomlanda ngemoto ngoba ulimele.
“Ngithe uma ngifika kubo ngamubuza ukuthi uliyazwe yini wathi ushaywe abantu bakhona endaweni ngabe sengimboleka umakhalekhwini wami ukuba afone ngoba wayelimele kakhulu. Wafonela amaphoyisa wawabikela ngalolu daba abe esethembisa ukuthi ayeza. Akuphelanga sikhathi esingakanani efonele amaphoyisa kwabe sekufona laba abamushayile bamucela ukuba eze bazoxoxisana angababophisi,” kuchaza yena.
Uthe wabe esemuthatha emuhambisa khona ngoba enethemba lokuthi bazoxoxa kulungiswe inkinga. Uthe uma befika impi yavele yaqala phansi njengoba base befuna ukumshaya futhi lona wesilisa olimele ayehamba naye.
“Ngabe sengigxuma ngimulamulela ngibuza ukuthi kungani bemushaya ngoba vele uselime. Kwabe ngiyimoshile ke lapho. Omunye walaba ababefuna ukumshaya wabe esekhipha isibhamu ngabe sengiyagxuma salwa saze sawa phansi uzakwabo wasicosha wathi uyangidubula kwabe sekudubuleka lona ayehamba naye.
“Sabe sesibaleka thina saya emotweni sahamba sayobika emaphoyiseni nafike angiyalela ukuthi angiqale ngihambise umakhelwane wami esibhedlela kuqala ngoba wayelimele kakhulu.” Uthe namanje bewumndeni basashaqekile kanti futhi bahlalele ovalweni ngoba abazi noma laba abantu abenze loku basazobuya yini bafune ukuzoqedela.
‘”Uma kungukuthi babefuna mina kungani bengezanga kumina kunokuhlasela umndeni wami? Kungani bebulala abantu abangenacala abangenzanga lutho?” Okhulumela amaphoyisa esifundazwe saKwaZulu-Natal uKapteni Nqobile Gwala uthe kuvulwe icala lokubulala kanye nelokuzama ukubulala esiteshini samaphoyisa saseBishopstowe. Uthe imbangela yaloku kuhlaselwa ibingakaziwa.